Warshadda Alaabada - Soosaarayaasha iyo Alaabada Shiinaha
Q Bandhigga Isdhexgalka Q
Q Taxanaha ah Android 6.0 1 + 8G
Q Taxanaha ah Android 8.0 2 + 16G
Q Taxanaha ah Android 8.0 3 + 32G
Q Taxanaha ah Android 8.0 4 + 32G
Tusaha Tusaha Isdhexgalka
T Taxanaha Android 6.0 1 + 8G
T Taxanaha Android 8.0 2 + 16G
T Taxanaha Android 8.0 3 + 32G
T Taxanaha Android 8.0 4 + 32G
MTplay Is-dhexgalka Is-dhexgalka
MT Taxanaha Android 8.0 3 + 32G
MT Taxanaha Android 8.0 4 + 32G
Kala Bixiyay Taxanaha Muuqaalka LCD
LYNDIAN MT Taxanaha Interacti ...
LYNDIAN Smartboard oo ...
LYNDIAN T Taxanaha Interactiv ...
LYNDIAN Q Series Interactive Flat Panel Display qeexitaan heer sare ah oo qeexan dareeraha dareeraha, tikniyoolajiyadda aqoonsi ee infrared sare, waxay taageertaa adeegsiga taabashada hoosta astaan ​​kasta oo calaamado ah. Nidaamka Android iyo nidaamka Windows oo leh 20 dhibic taabasho taabasho, dabacsan oo ku habboon in lagu shaqeeyo.
Waxyaabaha: Aluminium Daawaha Aluminium
Dhibco taabasho: 20 Dhibcood
Xallinta: 3840 * 2160 (4K)
Qaybta nalka dambe: DLED
Waqtiga Jawaabta: 8ms
LYNDIAN Smart Blackboard sabuurad is dhexgal ah
LYNDIAN BQ Series Nano Interactive Blackboard waa jiil cusub oo ah qalabka bandhigga waxbarida, oo leh bandhig HD, hawlgal taabasho, waxbarista qorista sabuuradda hal; La dhisay-in android, nidaamka Windows, wuxuu la kulmi karaa isticmaalka barida codsiyada kala duwan.
Dhibco taabasho: 10 Dhibcood
Cabbir ： L * H * D: 4250 * 1250 * 135mm
LYNDIAN 58 inch oo fidsan LCD Display
LYNDIAN 58 inch oo fidsan LCD Display Taxanaha Tareenka Ganacsiga LCD Display Wide Extra Wide helitaanka qaab, waxay bixisaa qaab cusub oo cusub oo lagu soo jiito dareenka dadweynaha. Waxyaabaha ay ka kooban tahay ee leh shaashad ballaaran, fidsan, qaab qaabeed leh si labo kormeere ay u noqdaan mid maxaa yeelay waad wadi kartaa oo aad abaabuli kartaa xayeysiinta iyo rakaabka.
Rakibaadda: Buundada shelf, buurta darbi oo ku dul istaag miiska waa la heli karaa
Gelinta: USB, SD Card Slot
Fasalka Maaddada: Guryeynta Birta
Qaybta nalka dambe: ELED
LYNDIAN 49.5 inch oo fidsan LCD Display
LYNDIAN 49.5 inch Fidinta LCD Display Taxanaha Tareenka Ganacsi LCD Muuqaal Dheeraad ah ， Bandhigan Nooca Baarka, dib u habeynta muuqaalka lcd, muujinta ugu fiican ee goobaha dadka laga heli karo, cabirrada loo habeeyay, Qalabka fidsan ee Ultra, gawaarida iyo isdhexgalka gawaarida iyo ciyaaraha isdhexgalka gawaarida iyo habka helitaanka qaab, waxay bixisaa qaab cusub oo cusub oo lagu soo jiito dareenka dadweynaha. Waxyaabaha ay ka kooban tahay ee leh shaashad ballaaran, fidsan, qaab qaabeed leh si labo kormeere ay u noqdaan mid maxaa yeelay waad wadi kartaa oo aad abaabuli kartaa xayeysiinta iyo rakaabka.
LYNDIAN 43.8 inch oo fidsan LCD Display
LYNDIAN 43.8 inch oo fidsan LCD Display Taxanaha Tareenka Ganacsi LCD Muuqaal Dheeraad ah play Bandhigan Nooca Bar, dib u habeynta muuqaalka lcd, bandhig ku haboon meelaha laga soo galo dadweynaha, cabirrada loo habeeyay, Qalabka fidsan ee Ultra, gawaarida iyo isdhexgalka gawaarida iyo ciyaaraha isdhexgalka gawaarida iyo habka helitaanka qaab, waxay bixisaa qaab cusub oo cusub oo lagu soo jiito dareenka dadweynaha. Waxyaabaha ay ka kooban tahay ee leh shaashad ballaaran, fidsan, qaab qaabeed leh si labo kormeere ay u noqdaan mid maxaa yeelay waad wadi kartaa oo aad abaabuli kartaa xayeysiinta iyo rakaabka.
LYNDIAN 43 inch oo fidsan LCD Display
LYNDIAN 43 inch oo fidsan LCD Display Taxanaha Tareenka Ganacsiga LCD Display Wide Extra Wide helitaanka qaab, waxay bixisaa qaab cusub oo cusub oo lagu soo jiito dareenka dadweynaha. Waxyaabaha ay ka kooban tahay ee leh shaashad ballaaran, fidsan, qaab qaabeed leh si labo kormeere ay u noqdaan mid maxaa yeelay waad wadi kartaa oo aad abaabuli kartaa xayeysiinta iyo rakaabka.
LYNDIAN 40.6 inch oo fidsan LCD Display
LYNDIAN 40.6 inch oo fidsan LCD Display Taxanaha Tareenka Ganacsi LCD Muuqaal Dheeraad ah play Bandhigan Nooca Baarka, dib u habeynta muuqaalka lcd, muujinta ugu fiican ee goobaha dadka laga heli karo, cabirrada loo habeeyay, Qalabka fidsan ee Ultra, gawaarida iyo isdhexgalka gawaarida iyo ciyaaraha isdhexgalka gawaarida iyo habka helitaanka qaab, waxay bixisaa qaab cusub oo cusub oo lagu soo jiito dareenka dadweynaha. Waxyaabaha ay ka kooban tahay ee leh shaashad ballaaran, fidsan, qaab qaabeed leh si labo kormeere ay u noqdaan mid maxaa yeelay waad wadi kartaa oo aad abaabuli kartaa xayeysiinta iyo rakaabka.
LYNDIAN 38.5 inch oo fidsan LCD Display
LYNDIAN 38.5 inch oo fidsan LCD Display Taxanaha Tareenka Ganacsi LCD Muuqaal Dheeraad ah Dis Bandhigan Nooca Baarka, dib u habeynta muuqaalka lcd, muujinta ugu fiican ee goobaha dadka laga heli karo, cabirrada loo habeeyay, Qalabka fidsan ee Ultra, gawaarida iyo isdhexgalka gawaarida iyo ciyaaraha isdhexgalka gawaarida iyo habka helitaanka qaab, waxay bixisaa qaab cusub oo cusub oo lagu soo jiito dareenka dadweynaha. Waxyaabaha ay ka kooban tahay ee leh shaashad ballaaran, fidsan, qaab qaabeed leh si labo kormeere ay u noqdaan mid maxaa yeelay waad wadi kartaa oo aad abaabuli kartaa xayeysiinta iyo rakaabka.
LYNDIAN 37.7 inch oo fidsan LCD Display
LYNDIAN 37.7 inch oo fidsan LCD Display Taxanaha Tareenka Ganacsi LCD Muuqaal Dheeraad ah Dis Bandhigan Nooca Baarka, dib u habeynta muuqaalka lcd, muujinta ugu fiican ee goobaha lagu soo galo dadweynaha, cabirrada loo habeeyay, Qalabka fidsan ee Ultra, gawaarida iyo isdhexgalka gawaarida iyo ciyaaraha isdhexgalka gawaarida iyo raadinta qaabka, wuxuu bixiyaa qaab cusub oo cusub oo lagu soo jiito dareenka dadweynaha. Waxyaabaha ay ka kooban tahay ee leh shaashad ballaaran, fidsan, qaab qaabeed leh si labo kormeere ay u noqdaan mid maxaa yeelay waad wadi kartaa oo aad abaabuli kartaa xayeysiinta iyo rakaabka.
Cinwaanka:501, dhismaha h, No. 5, Anping Road, Shibei Industrial Avenue, tuulada Mian, wadada Dashi, Degmada Panyu, Guangzhou
Dhammaan Hal Fagaare Is-dhexgal ah, 75 Is-dhexgalka Is-dhexgalka Is-dhexgalka, Bandhigga Smart Interactive Flat Panel Disorder, Isdhaxgalka Flat Panel Display, Taabo Muuqaalka Iskuduwaha Isgaadhsiinta, Is-dhex galka Whiteboard Interactive,